Tantely avy eto Madagasikara Anisan`ny tsara indrindra maneran-tany
Fampiasana Aterineto Mbola tara i Madagasikara
Hifarana anio ny fikaonan-doha nasionalin’ny “Aterneto” izay efa natomboka omaly tetsy Anosy.
Fampiroboroboana ny fizahantany Vahiny 800 000 isan-taona no tanjona
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly 17 septambra 2019 teny amin’ny CCI Ivato ny andiany voalohany amin’ny atrikasa iraisam-pirenena ho an’ny famatsiam-bola ho an'ny fizahantany sy ny fitaterana na ny “Wave Madagascar”,
Manizingizina ny orinasa STAR “Manaja ny tontolo iainana izahay”
Nivoaka tamin’ny fahanginany nanazava ny mikasika ny fiavian’ny katsaka hampiasainy ho akora fototra hanamboarana ireo zava-pisotro vokariny, omaly ny orinasa STAR, taorian’ny nandefasana fahitalavitra vahiny iray fanadihadiana toa miampanga ity orinasa ity.
Harena sarobidin’i Madagasikara Mirongatra ny fanondranana an-tsokosoko
Nahazo vahana indray tato ho ato ny fikasana hanondrana ny harena sarobidin’i Madagasikara, araka ny tatitry ny fadin-tseranana Malagasy. Anisany ny saika amoahana safira teny Ivato tamin’ny alatsinainy lasa teo izay nataona vehivavy Indiana 2.
Havila School sy BHMS Soisa Hisy fampiofanana any ivelany sy antoka arak’asa
Hisy ny fiaraha-miasa lehibe eo amin’ny Havila School etsy Mamory Ivato sy ny Business & Hotel Management School na BHMS avy any Soisa, araka ny fampahafantarana omaly tetsy amin’ny Hôtel Pietra Analakely.
Fampiofanana arakasa Tanora 25 mianadahy halefa any Kenya
Ho fampivoarana sy ho fampiroboroboana ny fiofanana arakasa dia tanora miisa 25 no halefan’ny orinasal Base Toliara handranto fianarana any Kenya.
Fitadiavan’asa Takian’ny orinasa maro ny fahaizana teny Anglisy
Tsy azo ihodivirana intsony ny tokony hifehezana ny teny Anglisy eto Madagasikara. Amin’izao fotoana izao mantsy dia saika mitaky ny fahaizana io teny vahiny io avokoa ireo orinasa maro.
Tafakatra amin’ny dingana famaranana amin`ny « Start-up : Entrepreneur-ship World cup” ny orinasa Ikiray Miel de Madagascar, izay orinasa mpamokatra tantely avy eto amintsika.
Tombony lehibe ho an’i Madagasikara amin’ny fidirany amin’ny sehatra iraisam-pirenena izao, indrindra ao anatin’ny resaka varotra. Tamin’ireo orinasa mpifaninana niisa 120 dia ny tantely vokarina eto amintsika no nahafa-po ireo mpitsara, nampian’ny tetikasa famarotana azy amin’ny teny Malagasy sy Anglisy. Marihina fa fifaninanana karakarain’ny “100 startups.co”, izay tafiditra ao anatin’ny fomba fiarovana ny tontolo iainana amin’ny tetikasa na orinasa vokarina, ny “start-up Entrepreneur-ship world cup”. Miha mitotongana ny fihariana tantely manerana ny faritra rehetra. Fahasimban`ny tontolo iainana ny antony lehibe mahatonga izany, tsy mahavanona ny tantely, tsy ahafahany mivelona. Miantoka ny fahatsaran`ny varotra izany, eto an-toerana sy any ivelany, indrindra ilaina ho an`ny fahasalamana.